Zeevou | I-PMS Ewina Umklomelo, iSiteshi Somphathi Nenjini yokubhuka
Oxhumana nabo be-Google
I-PMS ewina umklomelo nomphathi wesiteshi
IZeevou iyiProperty Management System kanye neChannel Manager eyenza ngokuzenzakalela zonke izindawo zebhizinisi lakho lokuqasha lesikhathi esifushane, ilungiselele izinqubo, futhi inciphise iphutha lomuntu.
Izici Ezizoguqula Ibhizinisi Lakho Kanye Naphakade
I-PMS yezindawo eziningi kaZeevou ikuvumela ukuthi uphathe zonke izakhiwo zakho kusuka ekungeneni okukodwa okuphakathi.
Qinisekisa ukuthi imikhaza yokubhuka ngayinye iyawafaka wonke amabhokisi, noma ngabe avelaphi.
Phatha konke ukungena kwakho - ama-keysafes, ama-smart locks, noma i-KeyNest - nge-Zeevou.
Thuthukisa ukubhuka kwakho okuqondile ngewebhusayithi yethu enobungani be-SEO ehlanganiswe namathuluzi aphezulu wokuhlaziya.
Phusha amanani akho nokutholakala ngesikhathi sangempela eziteshini ezingaphezu kwama-200 ngokuxhumeka kwethu okunamandla amabili kwe-API.
Izinqubo zokukhokha zikaZeevou zikuvumela ukuthi uphathe izinkokhelo zakho, ngaleyo ndlela kuthuthukise ukuhamba kwakho kwemali.
Vumela abagcini bendlu bakho bafinyelele kalula kulwazi ngenkathi besendleleni futhi basize ukuphatha ukuqasha kwakho.
Yiba nesibukezo esihle sokusebenza kwebhizinisi lakho nganoma yisiphi isikhathi - kungaba yizimali, ukuhlala noma ukusebenza.
Phatha konke ukuxhumana (ama-imeyili nama-SMS) kwezivakashi nabasebenzi abasuka endaweni eyodwa emaphakathi bese ugcina umkhondo wakho konke.
Finyelela i-CRM yesihambeli esakheke kalula esebenza ngokuzenzakalela ukuqoqwa kwamakheli e-imeyili futhi yakhe i-database ehambisana ne-GDPR ngaphandle kokuphakamisa umunwe.
Shintsha ukuphathwa kwakho kokuhlanza - kungaba ngabasebenzi abasebenza ngaphakathi noma ngokukunika inkontileka enkampanini yokuhlanza ethunyelwe ngaphandle.
IZeevou ivumela abatshalizimali nabanini bezindlu abasebenza nezinkampani ezilawula ukuqashwa kwamaholide ukuthi babuke ukuhola kwabo ngesikhathi sangempela.
I-Zeevou ikuvumela ukuthi ugcine kalula phezulu kwazo zonke izingqinamba zesondlo futhi uhlole ukuqhubeka kwazo kusuka ku-A kuye ku-Z.
Sikunikeza nge-Premium Support ngoba sazi kahle ukuthi impumelelo yethu incike kweyakho.
I-Zeevou ikuvumela ukuthi ukwazi ukuzenzela izibalo zenzuzo yakho nabanikazi obaphethe.
Diliva isipiliyoni esihle kakhulu sezivakashi ngeZeevou futhi ubuke ibhizinisi lakho likhula lisuka emandleni liye emandleni!
Phatha yonke imisebenzi yakho maphakathi, futhi uguqule ingxenye enkulu yemisebenzi yakho yansuku zonke yokuphatha.
I-Zeevou ikuvumela ukuthi usethe kalula amanani ngobuningi bezindawo eziningi noma ucindezele amanani usebenzisa amathuluzi entengo ashukumisayo.
Sebenzisa lesi sici esiyingqayizivele ukuphatha ukuqashwa kwakho kwasebusuku, kwamasonto onke, nakwezinyanga zonke kusuka kokungena ngemvume okukodwa.
Izici ezintsha zikhishwa njalo ngenyanga, njengoba sihlose ukuba seqhulwini ekubumbeni le mboni.
Ukushintsha Izinqubo Yakho
futhi Hlala emuva
IZeevou ihlangana nozakwethu abahlukahlukene ukukuvumela ukuthi uguqule zonke izici zebhizinisi lakho lokungenisa izihambi kusuka ezintweni, ekuhlolweni kwabavakashi, kwezokuxhumana kanye nokubalwa kwezimali.
Yini Eyenza Sihluke?
Ithimba lethu eZeevou lenze izici eziningi ezihlukile, ngokuya ngempendulo evela kubasebenzisi bethu eyenza umkhiqizo uhlangabezane nezidingo zempilo yangempela. Sikholelwa emisha, ukusebenza kahle, nokukhula. Sithuthukisa, siguquke futhi senze izinto ngendlela eyingqayizivele. Ukuthola ukuthi yini esehlukanisa nomncintiswano, thepha inkinobho engezansi.
Nweba Ukufinyelela Kwakho
ngokuxhuma kuziteshi ezingama-200 +
Gcwalisa ubusuku bakho obungenalutho ngokufaka kuhlu ukuqasha kwakho eziteshini eziningi ngangokunokwenzeka ngenkathi ugwema ukubhukha ngokweqile. Sabalalisa amanani akho nokutholakala ngokuchofoza okumbalwa kuziteshi zethu zomlingani ezingaphezu kwama-200 ngomthamo wokuxhuma we-Zeevou onamandla, isikhathi sangempela, indlela yokuxhuma ye-API.
Ukuzenzakalela yilokho esivelela khona! Qala ngokulayisha izakhiwo zakho ku-Zeevou, setha amanani akho, ukutholakala, bese uxhuma iziteshi. Yonga isikhathi se-admin bese usitshala ekukhuleni. Bese uhlala phansi, uphumule, ujabulele!
Ukulungele ukukhulisa nokukala ibhizinisi lakho? Vumela uZeevou enze imisebenzi yakho ejwayelekile nezinqubo zakho. Umane ugxile ekwandiseni inzuzo yakho. Masikwenzele ukuphakamisa okusindayo. Ukulula okunjalo!
UZeevou akayona nje i-PMS nomphathi wesiteshi. Simayelana nokunciphisa ukuncika kwakho kuma-OTA. Masihlanganyele, siphazamise imboni futhi sibone i-The Direct Booking Revolution! Ithuba elinje!
Joyina Ipulatifomu Yethu Yokubhuka Eqondile Ngokuphelele
Bhala uhlu lwezinto zakho ku-Zeevou Direct bese ubuka imali efanele kahle kusuka ekubhukeni okuqondile okugeleza ngqo emaphaketheni akho. Ubuwazi ukuthi amapulatifomu amaningi wokubhuka akhokhisa imali engu-15-25%? NgeZeevou Direct, bobabili ababungazi nezivakashi bathola amadili angcono njengoba kungekho muntu wesithathu ogcina ukusika. Futhi, alukho ulwazi lokuxhumana nomethuli nezivakashi eligodliwe, ngakho-ke uzoba nokuxhumana okusheshayo, okuqondile. Bhalisela mahhala manje futhi usisize sibone i-The Direct Booking Revolution! Akukho okuzosibambelela!
Amaphakheji Wentengo Yemali-mali yazo Zonke Izidingo
Awekho amakhomishini, akukho middlemen, akukho mali efihliwe!
Amathuba abaxhasi awapheli. Vulela amandla kaZeevou agcwele ngokubhalisela ezinhlelweni zethu zanyanga zonke noma zonyaka bese ushiya konke okunye kithi. Finyelela kukho konke i-PMS kaZeevou, umphathi wesiteshi, nenjini yokubhuka okufanele ikunikeze. Jabulela amalungelo angenamkhawulo futhi uphumule.
Thola iwebhusayithi yokubhuka eyi-SEO-friendly, eqondile bese ubala okuqashile endaweni yethu yokubhuka engakhokhiswanga, iZeevou Direct. Shintsha ukucubungula kokubhuka kwakho okuqondile. Joyina amabutho namuhla futhi usize inethiwekhi yethu Yabalingani Bozakwethu ikhulise ukufinyelela kwethu!
Izwi kubaxhasi bonyaka
Uma unamayunithi amaningi, kufanele ukhokhele kancane iyunithi ngalinye.
UMvangeli noma uPatron?
Okushiwo Abalingani Bezakwethu Ngathi
Okokuqala, ngicabanga ukuthi izinsiza nosizo oluthola kuZeevou kumnandi nje. Izikhathi zokugibela, ukuxhumana ngqo ne-WhatsApp kumqeqeshi wakho, isithunywa se-Facebook kanye nengxoxo eku-inthanethi esizeni seZeevou. Awukwazanga ukucela okuningi. Njenganoma yini enye, kuthatha izikhathi ezimbalwa ukwenza okuthile kuze kube yilapho usujwayele futhi manje sengithola ukuthi sengingakwazi ukuzulazula ku-Zeevou ngaphandle kokudinga ama-athikili osizo nama-FAQ nawo angamathuluzi amangalisayo ongawasebenzisa uma ufuna ukuzama izinto ku ungumnikazi futhi uzifundise. Inakho konke okudingayo kusuka kumakhodi ayisihluthulelo, amashejuli wokuhlanza, ama-imeyili azenzakalelayo nokunye okuningi futhi ngijabule kakhulu ukuthi ngithole uZeevou futhi ngenze ucwaningo lwami ngaphambi kokuya nanoma ngubani omunye umuntu.
Indawo yokuhlala edume ngezinsizakalo LTD
Sisebenzise uZeevou amasonto ambalwa impela futhi inzuzo engigqamile kimi kufanele kube yinsizakalo. Ukukwazi ukubhukha ukuboniswa kwehora eligcwele bekuyisiqalo esihle sohambo lwami lwaseZeevou olulandelwe isikhathi sokugibela samahora angu-1.5 futhi ngiyakwazi ukuthumela umyalezo engixhumana naye eZeevou noma kunini lapho ngithanda khona. Ukuba musha embonini yezinsiza zokuhlala kwakusabisa futhi iZeevou akuyona ipulatifomu elula yokuthola, kepha umbono omude wenkampani ohlanganiswe nensizakalo yamakhasimende kusho ukuthi ngiyazi ukuthi ngithola imali yami!
Izixazululo Zempahla Eluhlaza
Ngingasho ngobuqotho bonke ukuthi uZeevou ushintshe impilo yami! Sengidlulile kubaphathi beziteshi ezi-5 ebhizinisini lami leServiced Accommodation kuze kube manje, ekugcineni sengithole ukulungela ibhizinisi lethu. Kalula nje, uZeevou wenza izinto zibe lula kakhulu! Kuyashesha, kulula ukuyisebenzisa. Kusukela ngijoyina iZeevou ngibe nesikhathi esithe xaxa sokugxila ebhizinisini lami kunokuba kulo! Njengebhizinisi laseNingizimu Afrika siwuxhasa ngokuphelele umkhankaso oqondile wencwadi. I-Zeevou ikusiza ukwenza lokhu. Ukusekelwa okutholakalayo kuyamangalisa, uma ngibuza umbuzo eqenjini labasebenzisi be-Facebook nginempendulo ngemizuzu. UZeevou uyisipho sangempela kumhlinzeki Wokuhlala Omatasa Wensizakalo. Ngiyabonga!
Ngaqala ngamayunithi angama-zero kepha ngangifuna ukwenza izinto sengathi ngine-100 yokuqinisekisa ukuthi ngiyakwazi ukukala ngokushesha nangempumelelo. UZeevou akakaze aphuthelwe ukushaya maqondana nokuphathwa kwesiteshi futhi wenza ukuguqulwa okuqondile kube okuqonde kakhulu, sibonga kubo ukuthi sithole ukubekiswa okungu- £ 10K ngokuhlala ubusuku obuthathu nge-Airbnb. Inqubekela phambili nentuthuko ayiguquki futhi bathatha impendulo kahle futhi basebenzise izinguquko engiziphakamisile ukuthi iyiphi into ongayibona. Ngisho nenduna eyinduna uqobo ayinankinga yokubheka lapho ngibambeka. Ucezu olukhulu lwekhithi futhi luzomangalisa onyakeni owodwa noma emibili. Joyina inguquko…
UZeevou usize iCliftonvalley Apartments ukukala kusuka kumayunithi ama-3 kuye kwayi-15. IZeevou iyithuluzi elihle elisivumela ukuphatha kahle ukubhuka kwethu, izivakashi, abatshalizimali kanye nezimali. Ukuhlanganiswa ne-Signable, Xero ne-Stripe kube wusizo olukhulu futhi kwehlise umthwalo wethu wokusebenza, kwasivumela ukuthi sigxile kwezinye izindawo zebhizinisi. IZeevou iyaqhubeka nokuthuthuka ngokuhamba kwesikhathi futhi ngokushesha iba isitolo sokumisa esisodwa sezinto zonke zebhizinisi lethu lendawo yokuhlala. UZeevou unesifiso sokulalela nokuvumelanisa umkhiqizo ukuze uvumelane kangcono nezidingo zabasebenzisi bawo. Sibheke phambili ekuzameni izici ezintsha okwamanje ku-roadmap ephelele.
Eminye yemisebenzi yethu
"Akukona okwakhe ukuthi aziqhenye yena othanda izwe lakhe, kodwa kunalokho yilowo othanda umhlaba wonke. Umhlaba uyizwe elilodwa, futhi isintu siyizakhamizi zakhona." I-Baháʼu'lláh